शितला साटम २०२०: मुहूर्त, विधी र यस महोत्सवको महत्व - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
शितला साटम २०२०: मुहूर्त, अनुष्ठान र यस महोत्सवको महत्व
खेलकुद मेदवेदेव सकारात्मक कोरोनाभाइरस परीक्षण पछि मोन्टे कार्लो मास्टरबाट बाहिर तान्छ
समाचार विष्णु विशाल र ज्वाला गुट्टा अप्रिल २२ मा गाँठो बाँध्ने: विवरणहरू यहाँ जाँच गर्नुहोस्
अटोमोबाईलहरू कबीरा मोबिलिटी हर्मेस High 75 उच्च गति वाणिज्यिक डेलिभरी इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतमा सुरू भयो
चलचित्रहरू उगादी २०२१: महेश बाबू, राम चरण, जूनियर एनटीआर, दर्शन र अन्य दक्षिण ताराहरूले उनीहरूका प्रशंसकहरूलाई शुभकामना पठाए
वित्त सुनको मूल्य गिरावट NBFCs को लागी चिन्ता छैन, बैंकहरु सावधान हुनु आवश्यक छ
टेक्नोलोजी AGR दायित्व र नवीनतम स्पेक्ट्रम लिलामी प्रभाव दूरसंचार क्षेत्र को लागी
शिक्षा CSBC बिहार पुलिस कन्स्टेबल अन्तिम परिणाम २०२१ घोषित
यात्रा १० अप्रिलमा महाराष्ट्रमा भ्रमण गर्नका लागि १० उत्तम स्थानहरू
घर योग आध्यात्मिकता चाडपर्व चाडहरू oi-Prerna Aditi द्वारा प्रेरणा अदिति अगस्त १०, २०२०
शितला साटम वा शितला सप्तमी गुजराती पात्रो अनुसार एक महत्त्वपूर्ण चाड हो। गुजरातका मानिसहरूले यस दिनलाई देवी शितलाको पूजा र सम्मानका लागि मनाउँछन्। यस्तो विश्वास गरिन्छ कि देवी शितलाले आफ्ना भक्तहरूलाई दादुरा र कुखुराबाट बचाउँछिन्। यस वर्ष यो चाड़ १० अगस्त २०२० मा मनाइनेछ। यो चाड़को बारेमा अझ बढी जान्नको लागि लेख पढ्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
स्थायी रूपमा चिन कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने
शितला साटमका लागि मुहूर्त
प्रत्येक वर्ष शितला साटम सप्तमी तिथिमा भाद्रपद महिनाको कृष्ण पक्षमा मनाइन्छ। दिन रन्धन छठ वा बलराम जयंतीको अर्को दिन आउँछ। यस वर्ष यो १० अगस्त २०२० मा मनाउने छ। सप्तमी तिथि १० अगस्त २०२० बिहान :4::4२ बजे सुरु हुनेछ र ११ अगस्त २०२० बिहान 09: ०6 सम्म रहनेछ। शितला साटमको मुहूर्त बिहान :4::4:4 देखि छ। 06:20 pm
म मेरो शिक्षक मा एक क्रश छ
शितला साटमको विधी
शितला सातमको रीतिथिति बसोदा वा शितला अष्टमीसँग मिल्दोजुल्दो छ जुन भारतको उत्तरी भागहरूमा होलीको एक दिन पछि मनाइन्छ। यसको मतलब यो दिन, मानिसहरूले कुनै खाना पकाउँदैनन्। तिनीहरू बलाराम जयंतीमा एक दिन अघि तयार पारिएको खाना खान्छन्। यसका अतिरिक्त, त्यहाँ शिताला साटमसँग सम्बन्धित केहि थप अनुष्ठानहरू छन्। ती हुन्:
यस दिन देवी शितालाका भक्तहरू बिहान सबेरै स्नान गर्छन्। यसको लागि तिनीहरू नजिकको खोला वा पोखरीमा जान्छन्।
तिनीहरूले देवी शितलाको मूर्ति बनाउँछन् र हल्दी पाउडर, सिमी, चन्दनको पेस्ट र कुकुमले सजावट गर्छन्।
जसले सुनको मूर्ति स्थापना गर्न सक्षम छन् उही गर्न सक्छन्।
नइभिडियम्सको साथ विभिन्न प्रकारका फलहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्, शितला मातालाई पवित्र उपहार। तपाईं चामलको पिठो, घी, गुड़ र दूधबाट तयार गरिएको लड्डू पनि दिन सक्नुहुन्छ। मानिसहरूले यी लड्डूहरू रन्धन छठमा नै तयार गर्दछन्।
अब या त Shitala माता Vrat कथा पढ्नुहोस् वा सुन्नुहोस्।
अब देवताको आरती गर्नुहोस्।
पूजा समाप्त भएपछि, तपाईं खाना उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ। परम्परा अनुसार, यस दिन, मानिसहरूले दिनमा एक पटक खाना खान्नु पर्छ।
संस्कृतमा शितला शब्दको अर्थ हो, चिसो। देवी शितलालाई एक मानिन्छ जसले आफ्ना भक्तहरूलाई रोग र विरामीहरूबाट जोगाउँछन्।
राजस्थान र गुजरातमा यो चाड पूर्ण उत्साह र समर्पणका साथ मनाइन्छ।
शितला माता देवी दुर्गाको रूप मानिन्छ। यस्तो विश्वास गरिन्छ कि देवी शितलाले आफ्ना भक्तहरूलाई रोग प्रतिरोध क्षमता र स्वास्थ्यका साथ आशीर्वाद दिन्छन्।
शितला साटममा, राजस्थान र गुजरातका मानिसहरू देवी शितलाको मन्दिरहरूमा जान्छन्।
भारतका धेरै भागहरूमा देवी शितलालाई शितला मां वा शितला माता भनेर चिनिन्छ।
राम नवमी २०२०: Re कारणहरू किन भगवान विष्णुले अयोध्यामा रामाको अवतार लिए
अल्चेरिa्ग: आईआईटी गुवाहाटीको वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव
राष्ट्रिय चचेरे भाई दिवस २०१:: सर्वश्रेष्ठ भान्जा भाइहरूले तपाईंलाई उदासीन बनाउनको लागि उद्धरण
बिपाशा बसुको शीर्ष १० कसरत र आहार सल्लाहहरू
गर्भावस्था बारे रोचक तथ्यहरु
DIY क्यास्टर तेल र एलोवेरा सीरम बढिमा पातलो पात्रो भौौं बढ्नको लागि
बिसि बेले बाथ बनाउने विधि: कसरी बिसि बेले हुली अन्ना रेसिपी बनाउने
दुर्गा पूजा २०१:: १० उत्तम थिम-आधारित प्यान्डल तपाईले कोलकाता भ्रमण गर्नुपर्नेछ
बच्चाहरूमा शरीर मालिशको फाइदा
यो आम आहार योजनाले तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ
किन महिलाहरु Ve Veine Arms मन पराउँछन्
ओर्किटाइटिसको लागि १० सुरक्षित र प्रभावकारी घरेलु उपचार
यो जीवन शैली साइट जीवन शैली, सौन्दर्य, फेसन र स्वास्थ्य सल्लाह बारेमा समाचार मिति सम्म राख्न गर्नेछ।
च्याउ स्वास्थ्य लाभ र साइड इफेक्ट
प्राकृतिक रूपमा अंडरआर्म कपाल कसरी हटाउने
कसरी छिटो घरमा हात फ्याट घटाउने
मराठी भाषामा गुढी पाडवा अभिवादन
ओछ्यान बगबाट छुटकारा पाउन प्राकृतिक तरिकाहरू
कसरी दाह्रीको ख्याल राख्ने
© 2021. All Rights Reserved. pamperedpeopleny.com | गोपनीयता नीति